Mpanamboatra sy mpamatsy fitaovana - China Device Factory
Teknolojia fanamafisana Isothermal, marina, haingana, mora entina ary mora ampiasaina dia teknolojia fanamafisana asidra niokika (fototarazo) vaovao. Amin'ny maha biolojika molekiola ao amin'ny teknolojia detection vitro, ny fizotran'ny fanehoan-kevitra dia eo amin'ny mari-pana tsy miova hatrany, amin'ny alàlan'ny anzima manokana sy ny primer manokana hahatratrarana ny tanjon'ny fanamafisana haingana ny asidra niokleika.
Amin'ny fampiasana teknolojia fampangatsiahana semiconductor, zavamaniry PCR miisa firy nd360 dia afaka mahatsapa haingana ny fizotran'ny fanamafisana PCR, ary mamantatra ny signal fluorescence amin'ny alàlan'ny rafi-pitiliana amin'ny radio sy fahita lavitra ary manadihady sy manodina amin'ny alàlan'ny rindrambaiko famakafakana matanjaka.
Taranaka vaovao amin'ny asidra niokleika mpamantatra haingana ny teknôlôjia mpamantatra asidra nokômatika isothermal dia teknolojia vaovao mamantatra asidra nokleika vaovao novolavolain'i independerbio ho an'ny fangatahana fitadiavana haingana eo an-toerana, izay afaka manome detection asidra nokleika marina, haingana, mora ary miavaka. vokatra.
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Kitapo tsy misy fitrandrahana, Canine Parvovirus (Cp), Kitapo fitrandrahana asidra niokleary haingana, Kitapo fitsapana haingana an'i China,